Adwensakra de nhyira ba (1-4)
Amanehunu befi atifi fam aba (5-18)
Amanehunu a ɛreba nti, Yeremia dii yaw (19-31)
4 “O Israel, sɛ wobɛsan w’akyi a,” Yehowa asɛm ni,“Sɛ wobɛsan aba me nkyɛnNa woayiyi w’abosom fĩ no afi m’anim a,Ɛnde worenyɛ ɔkobɔfo bio.+ 2 Na sɛ woka ntamWɔ nokware, atɛntrenee, ne trenee mu sɛ, ‘Sɛ́ Yehowa te ase yi!’ a,Ɛnde amanaman no nam no so benya nhyira,Na wɔbɛhoahoa wɔn ho wɔ ne mu.”+ 3 Na nea Yehowa aka akyerɛ Yudafo ne Yerusalemfo ni: “Mumfuntum asaase pa mfa,Na ɛnsɛ sɛ mokɔ so dua ade wɔ nsɔe mu bio.+ 4 Muntwa twetia mma Yehowa,Na muntwa mo koma twetia,+Mo Yuda mmarima ne Yerusalemfo,Anyɛ saa a, nneɛma bɔne a moyɛ nti,M’abufuw bɛdɛw sɛ ogya,Na ɛbɛhyew a obiara rentumi nnum no.”+ 5 Monka wɔ Yuda, na mommɔ no dawuru wɔ Yerusalem. Monteɛm na mommɔ abɛn wɔ asaase no so baabiara.+ Monteɛm denneennen, na monka sɛ: “Mommoaboa mo ano,Na momma yenguan nkɔ nkurow a wɔabɔ ho ban no mu.+ 6 Momma ahyɛnsode* so na momfa ani nkyerɛ Sion. Mompɛ baabi nhintaw, na munnnyina hɔ.” Efisɛ mede amanehunu fi atifi fam reba,+ ɔsɛe kɛse bi. 7 Wapue te sɛ gyata a ofi ne dɔtɔ mu reba;+Nea ɔsɛe amanaman no atu reba.+ Watu afi ne tenabea sɛ ɔrebɛma w’asaase ayɛ tantaantan. Ɔbɛsɛe wo nkurow pasaa, na obiara rentena mu.+ 8 Eyi nti mumfura awerɛhow ntama,*+Munni awerɛhow* na munsu nteɛteɛm,Efisɛ Yehowa abufuhyew no nnan mfii yɛn so. 9 “Saa da no,” Yehowa asɛm ni, “ɔhene koma betu,+Na atitiriw nso koma betu;Asɔfo bɛbɔ hu, na adiyifo ho bedwiriw wɔn.”+ 10 Ɛnna mekae sɛ: “Ao, Awurade Tumfo Yehowa! Ampa, woadaadaa ɔman yi+ ne Yerusalem paa. Wokae sɛ: ‘Mubenya asomdwoe,’+ nanso sekan na ɛda yɛn menem.”* 11 Saa bere no, wɔbɛka akyerɛ ɔman yi ne Yerusalem sɛ: “Mframa a emu yɛ hyew befi sare so nkoko a ɛso ayɛ kwabokwabo so,Na ɛbɛbɔ afa me man babea* so;Ɛremma mmehuw hwiit so, na ɛremmeyiyi mu fĩ. 12 Mɛma mframa a ano yɛ den paa afi saa mmeae hɔ aba. Afei mɛka atemmusɛm agu wɔn so. 13 Hwɛ! Ɔbɛba te sɛ omununkum,Ne nteaseɛnam te sɛ mframa a ano yɛ den.+ N’apɔnkɔ ho yɛ hare sen akɔre.+ Asɛm ato yɛn, efisɛ wɔasɛe yɛn awie! 14 O Yerusalem, hohoro wo koma ho fi bɔne ho, sɛnea ɛbɛyɛ a wobegye wo.+ Wobɛkɔ so adwen adwemmɔne akosi da bɛn? 15 Ɛnne bi rekasa fi Dan,+Ɛrebɔ mmusu ho dawuru fi Efraim mmepɔw so. 16 Monka ho asɛm, yiw, monka ho asɛm nkyerɛ amanaman;Mommɔ no dawuru nkyerɛ Yerusalem.” “Atɛwfo* fi akyirikyiri asaase bi so reba,Na wɔbɛma wɔn nne so atia Yuda nkurow. 17 Wofi afã ne afã nyinaa ba no so te sɛ awɛmfo a wɔwɛn afuw,+Efisɛ watew me so atua,”+ Yehowa asɛm ni. 18 “Wɔde wo ara w’abrabɔ ne wo nneyɛe bɛba wo so.+ Mmusu a ɛbɛba wo so no yɛ nwene sɛ!Efisɛ awura wo koma mu tɔnn!” 19 Me nsono mu oo! Me nsono mu oo!* Mete yaw kɛse wɔ me komam.* Me koma rebɔ paripari wɔ me mu. Mintumi nyɛ komm,Efisɛ mate* abɛn nnyigyei,Ɛyɛ ɔko torobɛnto.*+ 20 Amanehunu rekɔ, na amanehunu reba; ɛno ara na yɛte,Efisɛ wɔasɛe asaase no nyinaa. Mpofirim ara na wɔsɛee me ntamadan,Prɛko pɛ na wɔsɛee ntama a wɔde ayɛ me ntamadan no.+ 21 Mɛkɔ so ahu ahyɛnsode* yi akosi da bɛn?Na mɛkɔ so ate abɛn nnyigyei yi akosi da bɛn?+ 22 “Efisɛ me man yɛ nkwaseafo;+Wɔmfa me nyɛ hwee. Wɔyɛ mma agyimifo a wonni ntease. Ɛba bɔne a, wɔn ani atew,*Na papa de, wonnim ho hwee.” 23 Mehwɛɛ asaase no, na hwɛ! na hwee nni so, na na asɛe pasaa.+ Mehwɛɛ ɔsoro, na na ne hann nni hɔ bio.+ 24 Mehwɛɛ mmepɔw, na hwɛ! na ɛrewosow,Na na nkoko rehinhim.+ 25 Mehwɛe, na hwɛ! na onipa biara nni hɔ,Na na wim nnomaa nyinaa atutu kɔ.+ 26 Mehwɛe, na hwɛ! asaase a nturo ayɛ so ma no adan sare,Na wɔasɛe ɛso nkurow nyinaa.+ Yehowa na ɔyɛe,N’abufuhyew nti na ɔyɛe. 27 Na nea Yehowa aka ni: “Asaase no nyinaa bɛdan amamfo,+Nanso merensɛe no pasaa. 28 Ɛno nti asaase no bedi awerɛhow,+Na ɔsoro beduru sum,+ Efisɛ me na makasa, na me na masi gyinae.Merensesa m’adwene,* na merentwe nsan* nso.+ 29 Wɔn a wɔtete apɔnkɔ so ne wɔn a wɔtotow agyan no dede nti,Kurow no nyinaa aguan.+ Wɔakɔhyehyɛ adɔtɔ mu,Na wɔaforo abotan.+ Kurow biara ada mpan,Na onipa biara nte mu bio.” 30 Afei a wɔayɛ wo pasaa yi, dɛn na wobɛyɛ? Kan no, wufuraa ntama kɔkɔɔ,Wode sika kɔkɔɔ agude hyehyɛɛ wo ho,Wokekaa w’ani ase* tumm sɛnea ɛbɛyɛ a w’ani aba bepuepue yiye. Nanso w’ahosiesie no nyinaa ankosi hwee,+Efisɛ wɔn a wɔpɛ wo no mpo apo wo.Seesei wɔrepɛ wo akum wo.*+ 31 Mete nne bi te sɛ ɔbea yarefo nne,Me ho yeraw me te sɛ ɔbea a ɔrewo n’abakan,Ɛyɛ Sion babea nne; ɔhome a ensi so. Watrɛw ne nsam, na ɔka sɛ:+ “Asɛm ato me, efisɛ awudifo nti mabrɛ!”*
^ Anaa “Mommobɔ mo koko.”
^ Anaa “nanso sekan ato yɛn kra.”
^ Ɛyɛ anwensɛm a wɔde ka ɔman no ho asɛm te sɛ onipa. Ebia wɔde rekyerɛ tema ne ayamhyehye.
^ Kyerɛ sɛ, nnipa a wɔkɔtetɛw kurow bi hwɛ bere a eye sɛ wɔtow hyɛ so.
^ Anaa “Me yam hyehye me! Me yam hyehye me!”
^ Nt., “me koma afasu mu.”
^ Anaa “me kra ate.”
^ Anaa “wɔyɛ anyansafo.”
^ Anaa “Merennu me ho.”
^ Anaa “merensan mfi ho.”
^ Anaa “Wototoo w’ani akyi.”
^ Anaa “me kra abrɛ.”